I-HomePod mini kungekudala iza kufikelela kumazwe amaninzi | Ndisuka kuMac
Kubonakala ngathi i-Apple ayizange iphose ithawula kwimarike yezithethi ezihlakaniphile. Abo babecinga ukuba emva kokuba iHomePod yasekuqaleni iyekisiwe, uApple wayeka ukuba nesithethi noSiri, babengalunganga kakhulu. Ubungqina boku kukuba langoku IPod yasekhaya mini, kungekudala iza kufikelela kumazwe angakumbi.
Ingxaki ngeHomePod mini lujongano lomsebenzisi. Ngaphandle kwesikrini okanye ikhibhodi, unako kuphela sebenzisa ngelizwi lakho. Kwaye ukufikelela kumazwe amaninzi, kuya kufuneka "uthethe" kwaye "uqonde" iilwimi ezininzi. Kungekudala i-HomePod mini, iya kuba "yiSweden."
Yenzekile kuthi sonke ngaphezu kwesihlandlo esinye, xa ubufuna ukunika iodolo kwiHomePod yakho, kwaye yenze into yaseSweden, idlula kwisicelo sakho. Ewe kubonakala ngathi kungekudala i-HomePod mini iya kuba yeyokwenyani yaseSweden, kwaye iya kuqala ukuthengiswa kuyo Suecia, ethetha ngesiSwedish, kunjalo.
Ingxelo epapashwe kwi Teknivecka icacisa ukuba i-Apple ivavanya i-HomePod mini eSweden. Abasebenzisi abaninzi baseSweden ngabavavanyi be-beta ukuvavanya Isithethi esihlakaniphile sika-Apple ngolwimi lwaso lwenkobe, ngaphambi kokuba isungulwe kwilizwe laseYurophu. Ividiyo esiyibonisa ngezantsi iyayingqina.
Inqaku elithe liqinisekisa ukuba kwi iinyanga ezimbalwa Inkqubo yokuqaphela ilizwi ye-HomePod mini yeSweden inokuba sekupheleni. Bavavanye iiveki ezisibhozo eSweden, kwaye kusekho ixesha lokugqiba ukulungisa inkqubo, kunye nokuba uSiri aqonde isiSwedish ngokulula.
Kuhlaziyo lwamva nje lwesoftware ye-HomePod mini, ukongeza ekongezeni inkxaso yeSicwangciso seLizwi loMculo weApple, iilwimi zesiDatshi kunye nesiRashiya zongezwa kwiSiri kwiHomePod, ecebisa ukuba iHomePod mini iyeza kungekudala. Russia, ENetherlands y Suecia.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-HomePod mini iza kumazwe amaninzi kungekudala
Ezona wallpapers zibalaseleyo zeentaba zeMac